Ungakuthola Kanjani Okuqukethwe Okuyimpinda
I-Textbroker Yethula isiQinisekisi Sokuqukethwe Esiyingqayizivele
ULwesine, May 13, 2010 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Abanye engisebenza nabo bathole imiphumela emihle ekuthengeni okuqukethwe ukuqala isayithi, ukuhlinzeka ngokuthunyelwe okuthile okufundisayo, noma ngisho nokondla uhlelo oluqhubekayo lwe-ghostblogging. Ukwakha okuqukethwe okuhle kungaba yinselele, ngakho-ke izinsizakalo eziningi ziye zavela ukusiza izinkampani ukwakha umtapo wazo wokuqukethwe.
Uma uthatha isinqumo sokuya ezishibhile noma uthenge izindatshana eziningi ngobuningi, ungabeka engcupheni yokuthenga okuqukethwe okuthathwe kwenye indawo kuwebhu. I-Textbroker iyisevisi eshibhile enikeza okuqukethwe. Kuleli sonto kwethulwe i-UN.COV.ER, isicelo samahhala sokuqinisekisa ukuthi okuqukethwe kwakho kuhlukile.
I-UN.CO.VER ingasetshenziswa ngezindlela ezahlukahlukene:
Umbhalo ofakwe ngesandla (kopisha futhi unamathisele)
Iwebhusayithi yonke, kufaka phakathi izizinda nezizinda ezingaphansi
Eqinisweni, ungabheka yonke iphrojekthi yeWebhu ngezimpinda:
IsiQinisekisi Sethu Sokuqukethwe sinomsebenzi odidiyelwe "wokukhasa" owakha imephu yesayithi yayo yonke iphrojekthi ye-Intanethi nokuqukethwe kwayo okubhaliwe. Ngemuva kwalokho i-UN.CO.VER iqhathanisa ngokuzenzekelayo ngamunye wale mibhalo nezigidi zamakhasi futhi ibuye ibuye nenqwaba yedatha, kufaka phakathi iphesenti lamagama akopishiwe namagama ngqo akopishiwe. Umsebenzi we-autostart wenguqulo yamanje ukunikeza ukuvikelwa okuphelele ngaphandle kokuphakamisa umunwe. Lapho iWindows iqala, kanjalo ne-UN.COV.ER, iqinisekisa ukuthi okuqukethwe kwakho kuhlolwe izimpinda nsuku zonke.
Uma usebenza nabahlinzeki bokuqukethwe benkampani yangaphandle, leli thuluzi lingaba utshalomali lwakho oluhle kakhulu. Into yokugcina oyidingayo ukuthi isayithi lakho likhonjwe njengesayithi logaxekile noma limangalelwe ngokushicilela okuqukethwe okuvikelwe.
Tags: ukungaqondanii-google searchumphumela wokuseshaukuhlolwa kwewebhusayithi
Akuyena Ogxekayo Obalayo